ZOARA FANANTENANA – Fiainam-panahy
Torohevitra ho an’ny ray aman-dreny momba ny fitaizana ankizy ao an-tokantrano
“Zaro amin’izay lalana tokony halehany ny zaza ! …” Ohab 22:6
Ampandraiso anjara amin’ ny fotoam-bavaka fanao ao an-tokantrano ny zaza na ny ankizy mba ho zatra mifandray amin’ Andriamanitra.
Azonao andramana ary ireto torohevitra ireto :
Mifandimby ny tsirairay ao amin’ ny fianakaviana mamaky ny tenin’ Andriamanitra.
Mifampizara izay zavatra azo tamin’ny fandinihana ny tenin’Andriamanitra.
Mifampitantana rehefa mivavaka ho mariky ny fiombonan’ aina.
Misy iray mivavaka dia mamerina ny fehezanteny voalazany ny rehetra.